Ny resak'i Ariya Daivari niaraka tamin'i Triple H momba ny hoaviny - Wwe
Ny antsipiriany momba ny fihetsik'i Triple H taorian'ny nanontanian'ny mpanao ady totohondry azy ny amin'ny ho avin'izy ireo WWE
Ilay kintana WWE teo aloha, Ariya Daivari, dia nanambara fa mpiady amin'ny cruiser marobe no nanontany an'i Triple H momba ny hoavin'izy ireo taorian'ny lalao tany amin'ny WWE Survivor Series 2016.
Tamin'ny fandaharana kickoff pay-per-view dia niara-niasa tamin'i Drew Gulak sy Tony Nese i Daivari tamin'ny ezaka very tamin'i Noam Dar, Rich Swann ary TJP. Na dia nifaninana tsy tapaka tamin'ny fahitalavitra WWE aza izy, Daivari dia iray amin'ireo mpitsangatsangana maro izay mbola tsy vita sonia tamin'ny fomba ofisialy tamin'izany fotoana izany.
Ilay 32 taona, izay nahazo ny famotsorana azy tamin'ny WWE tamin'ny volana Jona, vao tsy ela akory izay dia niresaka tamin'i Matt Rehwoldt (fantatra taloha hoe Aiden English) tao amin'ny Fitifirana mahitsy . Nilaza izy fa cruiserweights maromaro no nahazo tolotra fifanarahana avy amin'ny WWE taorian'ny nitadiavany fanazavana avy amin'ny Triple H momba ny asan'izy ireo.
Taorian'ny fandoavam-bola, dia samy karazana Hunter [Triple H] daholo izahay rehetra ary toy ny hoe: 'Hey, inona no mitranga? Miantso anay hatrany ianareo, saingy tsy misy manana hevitra raha mahazo asa isika na tsia, 'hoy i Daivari.
Ny zavatra mahatsikaiky indrindra, mijery antsika izy ary mandeha, 'Erm, angamba tokony hihazona ny alatsinaonareo ianareo,' 'hoy hatrany i Daivari. 'Izahay dia toy ny,' Okay, 'ka heveriko fa tamin'izany fotoana izany dia ho mpiady tsy miankina amin'ny WWE izahay. Izy ireo dia hiantso antsika rehefa mila antsika izy ireo, ary izany no izy. Ara-bakiteny, ny ampitso tao amin'ny RAW, nahazo mailaka izahay nanao hoe: 'Hanao sonia ianareo ry zalahy.'
Efa ho dimy taona izao, ny Triple H dia mbola tafiditra ao anatin'ny WWE ao ambadiky ny sehatra, indrindra rehefa miresaka momba ny fandaharana isan-kerinandro nataon'i NXT. Jereo ny horonantsary etsy ambony raha te handre ny eritreritr'i Jose G sy Rico El Glorioso momba ny fizarana AEW sy NXT amin'ity herinandro ity ao amin'ny Sportskeeda Wrestling's The Debrief.
Ariya Daivari dia niasa tamin'ny seho Vince McMahon sy ny Triple H tao amin'ny WWE
Nandany dimy taona tao amin'ny WWE i Ariya Daivari
Triple H dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fandaminana ny fifaninanana Cruiserweight Classic 2016. Resin'i Ariya Daivari tamin'ny lalao fihodinana voalohany tamin'i Ho Ho Lun talohan'ny niarahany niasa tamin'i Sean Maluta tamin'ny lalao maizina nifandona tamin'ny The Bollywood Boyz.
rahoviana no mivoaka ny fizarana manaraka an'ny dragon ball
Daivari dia nipoitra matetika tao amin'ny RAW nandritra ny taona voalohany an'ny fizarana cruiserweight ho ampahany amin'ny marika mena. Na izany aza, nifaninana tamin'ny fizarana 205 Live sy tsindraindray an'ny NXT izy nandritra ny hazakazaka WWE dimy taona.
Zoma Flex pic.twitter.com/ueY2ECocSG
- Ariya Daivari (@AriyaDaivari) 29 Mey 2021
Ny lalao tokana tokana nataon'i Daivari tamin'ny seho lehibe WWE Money isaky ny fijerena dia natao tao amin'ny WWE Money tao amin'ny Banky 2019. Resy tamin'i Tony Nese, tompon-daka Cruiserweight, tamin'ny lalao iray naharitra sivy minitra.
Azafady azafady ny Straight Shooting ary omeo H / T ny Sportskeeda Wrestling ho an'ny fandikana raha mampiasa teny nalaina avy amin'ity lahatsoratra ity ianao.
tsapako fa tsy ato aho
tsy hahita olon-kafa toa ahy ianao
rehefa tsy lohalaharana amin'ny fianan'ny vadinao ianao
ny fomba hijanonana ao anaty fanambadiana tsy sambatra
ny fomba hanakaikezana olona